URamaphosa uvula ompompi | Scrolla Izindaba
URamaphosa uvula ompompi
INingizimu Afrika kungenzeka iphathwe ibhabhalazi ezweni lonke ngoLwesithathu ekuseni ngemuva kokuthi uMengameli uCyril Ramaphosa ebuyisele ukudayiswa kotshwala ngoMsombuluko ebusuku.
Izindawo zokudlela zizokwazi ukudayisa utshwala, isikhathi esinqunyelwe ukubuyela ekhaya sesincishisiwe (kusukela ngehora le-11 ebusuku kuya kwele-4 ekuseni), kanti amabhishi nezindawo zomphakathi zivulekile nazo, kusho uRamaphosa ngoMsombuluko ebusuku ngesikhathi “enomhlangano womndeni” wakhe wakamuva.
Uthe nezitolo zikatshwala zizokwazi ukudayisa utshwala ngoMsombuluko kuze kube uLwesine, kusukela ngehora le-10 ekuseni kuya kwele-6 ntambama.
“Lolu shintsho lwenziwe ukuthi kwehle kakhulu ukwamukelwa kwabantu abane-Covid-19 ezibhedlela kuzo zonke izifundazwe, okunciphisa nengcindezi yokushoda kwemibhede nakubasebenzi besibhedlela,” kusho uMengameli.
Unxuse wonke umuntu ukuthi aqhubeke nokugeza izandla, azijwayeze ukuqhela emphakathini futhi aziphathe kahle.
IKhabinethi ithathe isinqumo sokwehlisa imikhawulo ka-Level 3 ngenxa “yokwehla” kokutheleleka kwabantu, ukwamukelwa kweziguli ezibhedlela kanye nokushona, engeza.
Imikhawulo ngokugcwele ithi:
Amahora esikhathi sokubuyela ekhaya njengamanje azoqala ngehora le-11 ebusuku kuya kwele-4 ekuseni. “Izakhiwo kuzodingeka ukuthi zivalwe ngehora le-10 ebusuku ukuze amakhasimende abo nabasebenzi babuyele emakhaya ngesikhathi sokufika,” kusho uRamaphosa
Imibuthano yezokholo izovunyelwa, kodwa ingeqi kubantu abangama-50 ezindaweni zasendlini kanye nabantu abayi-100 ezindaweni ezingaphandle. Izindawo ezincane zingaba nengxenye engamaphesenti angama-50 omthamo wazo.
Izindawo zomphakathi ezinjengamabhishi, amadamu, imifula, amapaki kanye namachibi okubhukuda omphakathi zizovulwa kabusha ngokulandela imigomo yezempilo.
Ukudayiswa kotshwala endaweni enelayisense kuzovunyelwa kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesine, kusukela ngehora le-10 ekuseni kuya kwele-6 ntambama.
Izindawo zokudlela namathaveni kungadayisa utshwala isonto lonke kusuka ngehora le-10 ekuseni kuya kwele-10 ebusuku.
Kodwa uRampahosa uRamaphosa ucele izwe ukuthi “liphuze ngokufanele ukuze singaziboni singena esimeni sokuhlukumezeka noma ekwandeni kwezifo ngenxa yokuziphatha budedengu”.
Uqonde ukuthi akukho ukuhamba olwandle, akukho ma-picnic epaki, futhi akukho phathi yasebusuku ebaluleke njengezimpilo ezingalahlekanga ezivinjelwe yile mikhawulo.
Yize le mikhawulo ingeyesikhashana, ukulahleka kwempilo kungunaphakade.